ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူလိုက်ပြီ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူလိုက်ပြီ….
Posted by နွေဦး on Mar 30, 2012 in Celebrity, Entertainment | 48 comments
7Day ဂျာနယ်သတင်းထောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုဖြင့် သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ၂ နှစ်ကျော်ကြာ တရားစွဲဆို ရင်ဆိုင်နေရသော သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦး နှင့်7Day ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်အေးသူစံတို့အမှုတွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားသူကြီးက မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၃ အရ သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးအား ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ ပေးဆောင်စေ၊ မဆောင်ပျက်ကွက်ပါက အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် တစ်လ ကျခံစေဟု အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးသည် ပြုံးရွှင်တက်ကြွစွာဖြင့် ရုံးတော်မှ လျင်မြန်စွာ ထွက်ခွာသွားသည်။
Voice Weekly facebook မှ ကူးယူတင်ပြသည်..။
ကဲကဲ ထက်ထက်ပီးရင် လေးဖြူဆက်သွားမယ် လာကြဟေ့…………
လေးဖြူပီးရင် လျှပ်စစ်မီး ပိတ်ဆို့မှု၊ ရောင်းစားမှု၊ ထိန်ချန်မှု၊ ခိုးမှု ၊ ပြည်သူဝတ္တရား နှောက်ယှက်မှု၊
အမှုပေါင်းများစွာ ဆီကို ဆက်သွားကြရအောင် လာကြပါကုန်။
ငွေတစ်ထောင် ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ…..
ဂဏန်းခုနှစ်လုံး လောက်သွားပြီ မဟုတ်လား…
ဂဏန်းခုနှစ်လုံးတန် ချက်လက်မှတ် လေးတော့…
ဟိဟိ.. ဖတ်လိုက်တာ.. နားထဲမှာ.. ဇတ်ထဲက ၀န်ကြီးတွေ လေသံ လုံးလုံး သြသြ နဲ့.. နှုတ်ခမ်းမွှေး တကားကားနဲ့.. ပါးစပ်ထဲ ကွမ်းသီးလုံး ငုံပြီး ပြောတဲ့ လေသံမျိုးနဲ့..
အသပြာ ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်တိတိ ပေးဆောင်စေ.. ( အနောက်က ဆိုင်းဝိုင်းက ပတ်မကြီး ဒုံးးးးးးးးးး )
အသပြာ ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် မပေးဆောင်ပါက… ( ဆိုင်းဝိုင်းက ပတ်မကြီး ဒုံးးးးးးးးးး)
ရုံးတော်မှ အလုပ် နှင့် ထောင်ဒဏ် ( ဆိုင်းဝိုင်းက ပတ်မကြီး ဒုံးးးးးးးး)
ကျခံစေ… (တရုတ် နဂါး အဖွဲ့က ပတ်မကြီး ဆက်တိုက် တီးတဲ့ အသံ ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး) ဒုံး)
တရားကို တရားသူကြီးစောင့် …စောင့်..ဟုတ်ပါဘူး..တရားကို နတ်စောင့်ပါတယ်လို့ 
ဟယ် တနားထှာ …
ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ ဟုတ်လား… ဘယ်လိုကြီးတုန်း။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတာ……
ဒီသတင်းကလဲ ရယ်ရတာပဲ …
အခုတလော ရယ်စရာသတင်းတွေ များများဖတ်နေရတယ် …
ပိုက်ဆံ၁ထောင်ရှိသူတိုင်း သူတပါးအား ..ဆံပင်ဆွဲ ပါပိတ်ရိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်….
တထောင်တန် ၁သိန်း အုပ် တအုပ် ကိုင်ပြီးတော့ လက်ညောင်းအောင် ချလို့ ရတယ်ပေါ့။
အမလေး ကြောက်ချာကြီး သူပြောတဲ့ အတိုင်း တွေးလိုက်မိတာ.. မလွယ်ပါလားနော်။
သိန်း ၁ထောင် ဆို တော်သေးတယ်။
တရားသူကြီး ဘယ်လောက် ယူသွားလဲ မသိဘူး။ သိချင်လိုက်တာ။
အရိုက်လည်း ခံရသေးတယ် အမှုတော့ နိုင်ပါရဲ့.. ကြေးအိုး တပွဲ ခေါက်ဆွဲကြော် တပွဲ စားမလောက်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့..
အာ… ဆြာဆူးကလဲ စိတ်ထိန်းပါအုံး ထောင်တန်တစ်အုပ်ဆို ထောင်ဒဏ်က လတစ်ရာ ရှစ်နှစ်ကျော်သွားမယ်နော် …. သီတဂူပရောဂျက်တော့ ပီးအောင်လုပ်သွားအုံး
အဲ.. အဲဒါဆို အလှူပြီးမှ ဒီကိစ္စ ဆက်စဉ်းစားမယ်.. လုပ်ချင်တာလေးတွေ.. အလှူကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပါအုန်းမယ်။
အမှုသည်အကျိုးဆောင် (ရှေ့နေများ)ဆိုပြီးရှိတယ် တရားရေးအရာရှိကိုတရားသူကြီးလို့ခေါ်တယ်
အောက်မှာ ဥပဒေနဲ့ရှေ့နေတွေထိုင်ဖို့ခုံနဲ့စားပွဲအသီးသီးပေးကြတယ် တရားသူကြီးခုံကကျန်ခုံတွေရဲ့အမြင့်
မှာတည်ကြတယ် တရားသူကြီးကျောဘက်နံရံမှာတော့တရားရေးလိုဂိုတံဆိပ်ရယ် နိုင်ငံတော်အလံရယ်ရှိပါ
တယ် အဲတော့ ဟိုစကားကြားဖူးကြတယ်မလား ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရ ဆိုတာလေ ဘယ်သူ
ဥပဒေရဲ့အထက်မှာတရားသူကြီးရှိတယ် တရားရေးလိုဂိုရယ်နိုင်ငံတော်အလံရယ်ရှိတယ် နောက်ပြီး
အသပြာ တစ်ထောင်အုပ်ကို စွဲကိုင်၍ ဖြောင်းတစ်ချက် တစ်ထောင်စီဖြင့်
လာဟဲ့ မောင်မင်း ရိုက်ပေလော့
ရှောင်ကြ ရှားကြလေ.. ဒုံ……
လာထား။ တထောင်တဲ့ကွ။ ဘယ်သူမှဗိုလ်မထားဘူး။ မကျေနပ်လို့ကတော့ရိုက်ပြီပဲ။ သို့သော် တခုတော့ရှိ ၏။ အဲဒီတထောင်ဖြစ်လာဖို့ နောက်ကွယ်က ဘယ်လောက်များပါလိမ့်။
ပါးရိုက် တာ မက နာကျင်စေမှု ဆိုပေမယ့် … ကိုယ် သွား၇ိုက်မှ ကံဆိုး ပြီး အ၇ိုက်ခံရတဲ့သူက သွားကျိုး သွားမှဖြင့် … ကိုယ်အင်္ဂါ ပျက်စီးစေမှု နဲ့ … ဂျေးထဲအောင်း နေရမှာ စိုးမိတယ် ….
ဟယ် (1000) ဆိုပါလား နည်းတဲ့ ငွေပမာဏ မဟုတ်ပါလားနော်
ဒီခေတ်နဲ့ဆို ဒီတစ်ထောင်ဆိုတာ မနည်းဘူးပဲ
တရားသူကြီးကတော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ တော်တော်ရက်စက်တာပါပဲလား ….
ကျပ် 1000 ကတန်ဘိုးမရှိလို့ ထားလိုက်ပါတော့…
ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကိုတော့ လက်ခံသွားရမှာပါ…
“ဥပဒေဘောင်အတွင်း နေထိုင်ခြင်း ဘေးကင်းရန်ကွာလွန်ချမ်းသာ”တဲ့
အဲဒီတရားသူကြီး နှာနု လက်သီးနဲ့ထိုး ရော့ တစ်ထောင်၊
ဘာတွေကျန်သေးလည်း ပြောကြပါဦး၊ တစ်သောင်းဖိုးလောက် လှူချင်လို့။
အာသီးကို ခြေမနဲ့ညှပ်ဆွဲပီး ကိုင်ပေါက်လိုက်
ဤသို့ တစ်ထောင် တိတိ ချမှတ်ပေးသော တရားသူကြီးအား ထက်ထက်မိုးဦး အပြင် ကျေးဇူးတင်သူများစွာ ရှိနေပါမည်။
၁။ဂျာနယ် သမား များ ။ ဂျာနယ်များရောင်းကောင်းပါဦးမည်။
၂။လွှတ်တော် အမတ်များ ။။လွှတ်တော်တွင် တင်ပြစရာရရှိသွားပါပြီ။
၃။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ။။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီမှု့ မရှိသော ဥပဒေဆိုကာ အမြန်ပြင်ရမည် ဆိုကာ နံမည်ကောင်းယူစရာ ရသွားပါပြီ။
၄။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအား ပါးရိုက်သော ဂျပန် ။ နောက် အချက်တစ်ရာလောက် ထပ်ရိုက်ပါရစေ တောင်းဆိုမည်လား မသိ။
ကို ထူးဆန်း .. weekly eleven မှာ …. စိမ်း ပေးခဲ့တယ် ဗျို့  …
၁၀၀၀ တန်လေးပေးပြီးတော့။ အဲ့အမိန့်ချတဲ့ တရားသူကြီးကို ထပ်ရိုက်ခဲ့ရမှာ။ :-)
အဲ့ဒီကျတော့ စံပြဆိုပြီး ထောင်ဒါဏ် တစ်နှစ်ပေါ့ကွယ်… ငှဲ .. ငှဲ .. ငှဲ..
လိုက်ကြရိုက်ကြအမှုဖြစ်ရင်လိုက်ရှင်းပေးမယ့်အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးရှိတယ်။ မာမီဖြဲ သူတို့ကိုသများက
ပို့စ်တင်ပြီးဂုဏ်ပြုထားတယ်နော်……. ရှာကြည့် ……. ရွာနာမည်ဟာသမှာရှိတယ်။
အော်….တရားရေးရာဆိုတာ ဒီလိုမျိုးကိုး ….
တစ်သိန်းပေးပြီး လောလောဆယ်တော့ လျှပ်စစ်ပိုလို့ ရောင်းရပါတယ်ပြောတဲ့ ပါစပ်ကို ရိုက်မယ်ဗျို့ လိုက်ကျမလား ကွယ်တို့
ကြာသလားလို့ လိုက်ပြီး လက်ခုပ်တီးအားပေးမယ်။ လက်နာရင်ဆေးလူးပေးမယ်။
လုပ်လိုက် လေ Onyx
1000 တဲ့ များလိုက်တာ..။
ကျုပ်သာ အေးသူစံ အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရင် ၊ ပါသမျှ ပိုက်ဆံကုန်တဲ့အထိ ၊ ပါးတစ်ချက်ရိုက် ၂၀၀၀ ပြန်ပေးပြီး ၊ ရှယ်ဆွဲမှာ သေချာတယ်ဗျို့ ။
ဟီးဟီး ပါးတစ်ချက် တစ်ထောင်တဲ့လား ….ဘယ်ပြန်ညာပြန် နှစ်ဖက်ရိုက်မယ် သုံးထောင်ပေးမယ် …
အကြွေမရှိဘူး… . ငါးထောင်တန်ယူထား …ပြန်မအမ်းလည်းရတယ် … ဟဲဟဲ
ဒီဥပဒေက ၁၈၆၁၊ မေ က ဟာလေ။ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့ လို့ ပြောနေကြလို့ ဆက်သုံးနေတာ ဥပဒေ ရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ ဆိုလို့ နောင်မလုပ်ရဲအောင် ၁၈၆၁၊ မေ လောက်တုန်းက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ရွေတစ်ကျပ်သား ၁၀၀၊ ၂၀၀ ခေတ်က ငွေတန်ဖိုးနဲ့ တွက်ပြီ ထက်ထက် ကို နာနာ နှက်လိုက်တာ … ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ ပေးဆောင်စေလို့ ။
ထက်ထက်ခမျာ .. ပန်ပန် ….. ပန်းပန့်ပန့် ပန်…………. လို့ ဆိုပြီး ပန်းပန် သွားလေရဲ့။ ပန်းပန် …………..ပန်းပန် ပန့် …………..ပန်းပန်
ဒီ လို ပါရိုက်တာ ငွေတစ်ထောင် ချမှတ်သည်ဆိုတဲ့
ပြစ်ဒါဏ်က တစ်ကယ် ရှိနေလို့ပါပဲ
ဒီလိုမျိုး ငွေတစ်ထောင်တပ်ရိုက်ခြင်းအပေါ် လှောင်ပြောင်ရယ်မော နေခြင်းကြောင့်
ကျုပ်တို့ရဲ့ မြန်မာပြည်မှာပြဌာန်းထားတဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေ ဘယ်လောက်
လက်ရောက်မှု သာမာန်နာကျင်စေမှု များဟာ အမြင်ဆုံးပြစ်ဒါဏ်ဟာ
ငွေတစ်ထောင်သာ ပြစ်ဒါဏ်ထိုက်စေ ကြောင်း ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ထဲက ပြဌာန်းထားတာဗျ
ပြင်ဘို့သင့်လှပြီ ပြင်ရန် အချိန်ကောင်းကိုလဲေ၇ာက်နေပါပြီ
ဒါပေမယ် လတ်တလောတော့ ပါရိုက်ရင်ငွေတစ်ထောင်ပဲ ဆောင်ရမှာဆိုပြီး
အကောင်ကြီးကြီးသားသမီးများအား ပါးသွားမရိုက်ကြပါနဲ့ အဲဒီပြစ်ဒါဏ်က
ဒါတောင်… နောက်ဆက်တွဲပုဒ်ထီးပုဒ်မ ပြစ်ဒါဏ်များမပါသေးပါကြောင်း။။။
အဲဒီအမိန့်ကိုဖတ်ကြားနေတဲ့ တရားသူကြီးရဲ့ မျက်နှာအမူအရာနဲ့
အမိန့် ချဖို့အရေး ပိုက်ဆံပေး
မြန်မာ့ ဥပဒေ ။
u ag says:
kyut kyut kyut
ခုမှ တွေ့ လို့ ။ဘာမှ ပြောတော့ပါဘူး။ ပြစ်ဒဏ်ပျော့လွန်း၏
အဲမန်းတိ၇င်…. ဆင်တကောင်လောက်ပေးပြီး ငါးချက်လောက်ရိုက်လိုက်ပါဒယ်အေ
killer kira says:
Htet Htet yae u should hit more than one time
The judge may think like that.